ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်း
a)khin maung myint (in mum
The commission main duties is to find out data and facts and to analysis the main reason and who are motivated such issue. who are being killed and why innocent people are killed by arams forces. Why Rohingya are targeted intentionally. Why all are silent after saw unjustices. Where is the equality and human right. Is the democracy which all myaanmar people expecting. Why Daw Aung San Suu kyi is still silent without saying anything. we can not build true union of nation,if we will ignore justices and equality.
Aug 22, 2012 04:29 PM
Burmese Immigration officers took bribe and issued ID to Bangalis. These immigration--OUT TAN SAR-- to be punished severely Aug 19, 2012 10:29 PM
မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်စလင်များကို ကလားလို့နိုင်းပြီးမသုံးပါရန်
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်လွတ်လပ်သော “စုံစမ်းစစ်ဆေး ရေးကော်မရှင်”တွင်အပြစ်ကျူး လွန်သောပါတီဝင်များပါဝင်နေသည့်သည့်အ တွက်တရာမျှတမှုမရနိုင်။"
PLEASE APPLY WITH Burma Citizenship Law1982
Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home fromaperiod anterior to 1185 B.E., 1823 A.D. are Burma citizens.Every national and every person born of parents, both of whom are nationals are citizens by birth,A person who is alreadyacitizen on the date this Law cones into force isacitizen. Action, however shall be taken under section 18 for infringement of the provision of that section.,ETC
Choose the Truth,Do not forget citizen law1982,ilegal criminal person GO BACK HOME.
Aug 18, 2012 05:27 AM
ကော် မရှင်ဖွဲ့လည်း အပို တွေပါ။တောင်ကုတ် လူ၁၀ဦး ရက်ရက်စက်စက်အသတ်ခံရ တာတောင် ဘာမှမလုပ်ပေးတာကို
နိုင်ငံအတွင်း လူမျိုးခြားတွေ နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေ မကြာခဏ ဆူပူနေတယ်ဆို မိမိတို့အတွက်အကျိုးမရှိ သလို တိုင်းပြည်နှင့် သမ္မတ ကိုလည်း သိက္ခာ ကျစေပါတယ။
ယခုလို ကော်မရှင်ဖွဲ့ပေးတဲ့အတွက့် ဦေးမျိုးမြင့် အပါအဝင် iက်ာမရှင်များအားလုံး သမ္မတ ရဲ မျှော်လင့်ချက် ပြည့်ဝအောင် ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါတယ်